Imaamyada iyo macalimiinta Madarasooyinka Isiolo oo raashin gar gaar ah loo qeybiyey – iftiin fm
Imaamyada iyo macalimiinta Madarasooyinka Isiolo oo raashin gar gaar ah loo qeybiyey
Wararka ka soo baxaya deegaanka Isiolo ayaa waxay sheegayaan in deeq raashin loo qeybiyey qaar ka mid ah imaamyada iyo macalimiinta madarasooyinka gudaha deegaankaasi.
Raashiinkani loo qeybiyey imaamyadani iyo macalimiintani madarasooyinka ayaa waxaa bixiyey xubnaha shacabka deegaankaasi .
Kadib markii dowladda dhexe ay ilaabada uu laabtay madarasooyinka iyo masaajidyada cabsi laga cabo cudurka corona awgiis ayaa qaar ka mid ah macalimiinta madarasooyinka iyo imaamyada waxaa soo food saartay dhibaatooyin xoogan Dhanka noolasha .
Guddomiyaha golaha ay ku mideysan yihin imaamyada iyo Waacidiinta gudha countiga Isiolo Col.Hassan Bonaya ayaa sheegay in uruurkiisa oo kaashanayaan idaacadaha ku yeela halkaasi uu ku guuleystay in xubnaha shacabka ay ka aruuriyaan raashinkaasi gar gaarka ah oo markii danbe loo qeybiyey macalimiinta madarasooyinka iyo imaamyada qaarkood .
Dhanka kale madaxda diimaha deegaanka Isiolo ayaa waxay ugu baaqeen dowladda in ay qaadda ka saarto xayiraayadaha sababay in ilbaabada loo laabo madarasooyinka madaam kiisaska cudurka corona ay hoos uu sii socdaan .
← Heshiiska Chelsea ee Edouard Mendy oo joogsaday
Xildhibaan Oscar Sudi oo maxakamadda ku laabanaya Maanta →